Kudya zvidhori kunoshanda here? | Bezzia
Pau Heidemeyer | 07/04/2021 23:55 | Nutrition, Utano
Kune akawanda madhayeti mukati mepasi rehutano, imwe neimwe yakanangana nekuzadzisa chinangwa chakasiyana: kuonda, kuwedzera muviri, kugadzirisa hutano hwemwoyo, kana chikafu chisina mafuta kana sodium.
Kune rimwe divi, kune detox dhayeti iyo inofarira rave ongororo. Iwo akakosha ekuchenesa muviri uye anowanzove nevateveri vazhinji, kusanganisira vane mukurumbira.
Tisati tatanga kudya, zvakakosha kuti tizive zvinangwa zvatinoda kuzadzisa, uye mune iyi nyaya, isu zvakare tinofanirwa kuziva njodzi dzinogona kuitika idzo chikafu chatiri kuda kutanga kuve nacho.
Kune akawanda detox kudya, mamwe akagadzirwa zvichibva pazvinwiwa, mishonga kana vamwe vachitsanya, uye kuiswa kwezvikamu zvidiki zvemuriwo nemichero, pamwe nezvimwe zvinowedzera.
Kudya kunoshatisa muviri, kunokutendera kuti uteedzere zano rakaomarara rekudzora huremu nekukurumidza, inobatsira kuchenesa muviri wemakemikari ane chepfu, uye chero zvakawandisa.
Kana tichitaura nezvekudzora muviri muviri, tinoedza kuita kuti muviri wedu ubvise huturu hwakaunganidzwa mushure mekudyiwa zvakanyanya kwezvakagadzirwa uye zvese zvakasvibisa zvakatipoteredza zvatakakwanisa kugaya.
1 Detox inodya zvese zvaunoda kuti uzive
1.1 Zvidzidzo uye detox kudya
1.2 Chirevo chekudya detox
2 Maitiro ekuti detox anoshanda sei
3 Teerera kune detox kudya
4 Idya uine hutano uye muviri wako uchaita zvakasara
Detox inodya zvese zvaunoda kuti uzive
Isu tinofanirwa kuziva mhedzisiro mhedzisiro iyo mhando iyi yedhidhi dhayeti inogona kuve nayo. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti mhando iyi yekudya inokurudzira kudya zvakasikwa chikafu, e sanganisira mvura yakawanda nemiriwo, zvinhu zvakakunakira hutano hwako.
Kufanana nezvimwe zvakawanda zvekudya zvekudya, detox dhayeti inogona kuve nezvinokuvadza mhedzisiro yatinofanirwa kuziva tisati tazvishandisa.
Zvidzidzo uye detox kudya
Parizvino hapana zvidzidzo zvakawanda zvinoratidza kushanda kwayo, sezvo paine vanhu vari kutsigira rudzi urwu rwekudya sezvo vachipokana kuti muchetura haugari uchisiya muviri zvakasikwa uye vanoda kukudzwa kubatsira kuchenesa muviri.
Vanhu ava vanocherekedza kuti huturu hunogara mairi sei iyo yekugaya, yemudumbu, uye lymphatic masystempamwe neganda nebvudzi uye zvinogona kukonzera kuneta, kutemwa nemusoro uye kuda kurutsa.
Pane zvinopesana, kune vanhu vanoti zvipfu zvinobviswa zvakasikwa uye hazvidiwe kutevedzera kudya kwakaomarara kuti uzviite.
Chirevo chekudya detox
Pfungwa yekutanga kuseri kwekudya detox ndeyekusiya mamwe marudzi ezvikafu zvinogona kunge zvine chepfu yemwaka. Pfungwa ndeye kuchenesa uye kuchenesa muviri wezvese "zvakaipa." Zvisinei, chokwadi ndechekuti muviri wemunhu wakagadzirwa nenzira dzawo dzekudzikisa muviri.
Maitiro ekuti detox anoshanda sei
Sezvatakataura, hapana chete detox dhayeti, ivo vanosiyana pakati pavo uye mazhinji acho anoda imwe mwaka yekutsanya, ndokuti, rega kudya kwemazuva akati wandei wozozviratidza zvishoma nezvishoma uye zvishoma nezvishoma mamwe marudzi ezvikafu mukudya.
Zvizhinji zvakadai zvekudya zvinokurudzira kudiridza kwekoloni kana enema "kuchenesa" iyo colon. Kumwe kudya kunokurudzira kutora zvinowedzera kana akasarudzika mhando dzetii kubatsira mukuchenesa kwemuviri.
Kudya kwe detox kunogona kudzivirira uye kutoporesa zvirwere kupa vanhu simba rakawanda kana kutarisa. Kuve nemuviri wakaguta ne "zvine chepfu" zvekudya kunotinetesa, kunonoka uye nemusoro.
Izvo zvakakosha kuti uve nechikafu chakaderera mumafuta uye chakakwira mune fiber, nekudaro kuchengetedza kudya kune hutano uye nekupa simba rakawanda kune avo vanozvitevera.
Nekudaro, sezvatakatarisira kare, humbowo hwesainzi huri kushomeka kuti izvi zvikafu zvinobatsira muviri kubvisa chepfu nekukurumidza kana kubviswa kwehupfu, kunyangwe zvisingambokuvadza kutevera chikafu chinotendera muviri kutora zororo.
Teerera kune detox kudya
Vanhu vazhinji vanotenda kuti kana vakaenda pakudya detox vacharasikirwa nehuremu hwakawanda, zvisinei, hachisi chokwadi zvachose uye mamwe madhairekitori anofanirwa kutariswa kuitira kuti asatore njodzi, sezvo kana zvikafu zvakaomarara zvikaitwa, izvi zvinogona kutora mutero wavo.
Kudya kweDetox hakuna kukodzera kune vanhu vane zvimwe zvirwere. Mupfungwa iyi, haina kukurudzirwa kune vanhu vanotambura nechirwere cheshuga, chirwere chemwoyo uye zvimwe zvehutano husingaperi. Kana iwe uri nepamuviri kana uine matambudziko ekudya, iwe unofanirwa kudzivirira idzi mhando dzezvikafu.
Kudya kweDetox kunogona kupindwa muropa. Izvi zvinodaro nekuti kushomeka kwechikafu kana kufambiswa kweiyo enema kunogadzira manzwiro akasiyana uye pamwe vanhu vazhinji vanozvifarira. Kune vamwe vanhu, kurudziro yakafanana neiya inonzwikwa nicotine kana doro zvinowanzoita sekunzwa.
Zvekuwedzera kuti ubvise muviri zvinogona kuva nemhedzisiro. Mazhinji ezvekuwedzera zvinoshandiswa panguva idzi zvekudya zvine detox ndiwo anonyanyisa marara, zvichikonzera vanhu vane "jamu" kuenda kuchimbuzi zvakanyanya. Izvi zvinogona kuve nemhedzisiro yehutano, sezvo laxative yekuwedzera iri mishonga inogona kukonzera kupera simba, kusaenzana kwemamineral uye zvakare matambudziko mugadziriro yekugaya.
Kudya kweDetox kwakagadzirirwa kuzadzisa zvimwe zvinangwa zvenguva pfupi. Zvinogona kukonzera mamwe matambudziko ehutano, kutsanya kwenguva yakareba kunogona kudzora metabolism yemunhu. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kudzosera huremu hwakarasika uye zvakanyanya kuoma kurasikirwa nehuremu hwakawanda mune ramangwana.
Idya uine hutano uye muviri wako uchaita zvakasara
Kudya mimwe michero nemiriwo ndiyo hwaro hwehupenyu hwakanaka. Haufanire kukanganwa kutora, michero yemwaka, miriwo uye faibha, pamwe nekunwa mvura yakawanda. Asi zvakare, unofanirwa kuona kuti wawana zvese zvinovaka muviri kubva kune zvimwe zvekudya.
Mapuroteni haafanire kushayikwa kana, pamwe nemavhitamini kana zvicherwa izvo zvinofanirwa kuwanikwa kubva kwakasiyana masosi. Chinhu chakanyanya kukosha mukudya zvine hutano chakasiyana uye kwete chakawandisa, nekuti kunyangwe chikafu chikagwinya sei, kana chikatorwa zvakawandisa, chingatikonzeresa zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Nutrition » Kudya zvidhori kunoshanda here?